Poltava lingumuzi Ukraine futhi sokuqondisa Poltava esifundeni. It is elisoGwini North-East wezwe lethu, on the Pridneprovskaya yasehlanzeni namanga osebeni lomfula Vorskla. Umbiko wokuqala documentary emzini sangomhla ka ngekhulu le XII. Njengoba 27-th, February kwaze 3-d, June 1925 kwaba sokuqondisa esifundazweni Poltava. UMkhandlu isibonakaliso zayo futhi ifulege. Poltava kuyinto elaliyisikhungo esibalulekile zamasiko kanye enkulu yezokuthutha iphuzu nodal. Esigcawini somuzi kuyinto 104.42 km² futhi ihlukaniswe yaba 3 izifunda main (Oktyabrskiy, Kievskiy futhi Leninskiy). Labantu kulo muzi cishe 300,5 abantu abayizinkulungwane. Zikahulumeni wasekhaya ethulwa ngu umkhandlu waleli dolobha wendawo kanye nenhloko yalo muzi (umphathi-dolobha).
Poltava iseningizimu Engxenyeni esempumalanga yeYurophu, e 301 km kuya eMpumalanga Kiev.
izixhumanisi Geographical: 49° 00`35“N 34 ° 00`33“E, 140 m ngenhla kolwandle. Umuzi isendaweni Pridneprovskaya yasehlanzeni futhi amanga emfuleni Vorskla amabhange. Enye yezinto Element umfula sika Kolomak agelezela Vorskla ngaphakathi komuzi. Futhi, ngaphakathi emagcekeni ka Poltava kukhona ezinye amachibi akunjalo big yemvelo kanye inala emadanyini yokufakelwa. wokusiza City, ikakhulu, ngisho, kodwa phezu ibanga 1,5 km ukusuka kulowo mfula angabona eyehlelayo ebukhali (ibhange kwesokudla Vorskla sika, lapho Poltava sikhona - obuhlabayo, amagquma ukuphakama akhuphukele 80-100 m ukuba ezingeni emfuleni). isikhundla ezemvelo Poltava kunalokho enenzuzo futhi phakathi umlando babeba nethonya elikhulu kubantu ukuthuthukiswa umuzi. Poltava umi imikhondo ezokuthutha ebaluleke kakhulu. umuzi wethu usinika service ukuxhumana phakathi kwemizi enkulu Ukraine: Kiev, LaseKharkov futhi Dnepropetrovsk.
Ngokuvamile idolobha lethu sezulu esipholile, yezwekazi ne kubanda ebusika kanye afudumele (ngezinye izikhathi sultry ihlobo). lokushisa ngo-January ngokusho kokuma isikhathi eside esizayo kungenye 6.8 degree centigrade ngezansi zero. Ihlobo efudumele futhi omile. Le nyanga yaziwa ngokushisa kuyinto July, njengoba umthetho. lokushisa in July 20.9 degree centigrade ngenhla zero. Phakathi zokugcina 100 - 200 iminyaka izinga lokushisa Poltava, kanye kulo lonke World, has ukuthambekela ukwandisa. Phakathi al sikhathi izinga lokushisa wonyaka anda cishe ku 1,5 ° C. Lo mdlali oneminyaka engu olufudumele, ngokusho observation yesikhathi eside, kwaba unyaka ka 2010. Ukwanda enkulu lokushisa kwenzeka izinyanga zokuqala eziyisithupha. In Poltava, Imvula wonyaka 569 mm (omncinyane February - March, ukuzidlula zonke - e July). Njalo ebusika kukhona cover iqhwa, ukuphakama esiphezulu of ngokuvamile baphawula ku February. Esijwayelekile nomswakama isihlobo sakho siyindoda 74%, omncinyane May (61 %), kunazo zonke December (88 %).
Ngokwezibalo isimo on the 1-st, January 2010, labantu komuzi kwaba 300, 5 abantu abayizinkulungwane. It sancishiswa kuze kufinyelele 14 abantu abayizinkulungwane uma ziqhathaniswa ngonyaka ka 1989 - Futhi akusiyo inkomba kubi kangaka, kucatshangelwa isimo ekhanga abantu babo bonke e-Ukraine (Ngokwesibonelo, labantu eLvov kungancipha up to 57 Abantu abayizinkulungwane le nkathi yesikhathi). Poltava ukwanda kwabantu ingaphezu 3000 km² ngayinye. 87% of labantu komuzi Ukraine; 44, 0% labantu of abazikhandlayo behileleka ku sphere zezimboni; 16, 0% - Enkonzweni sphere; 6, 0% - Zibe isayensi, art kanye nemfundo.
Poltava iphuzu ezokuthutha enkulu North-East nodal of Ukraine. Idolobha lethu yindawo, lapho ezibalulekile wesitimela amathrekhi nemigwaqo emikhulu basuke eyayiphambana. Kukhona network ezokuthutha umphakathi omkhulu futhi ithuthukiswe. Poltava kuyinto ebaluleke cargo traffic isikhungo. Ihlala on owela omkhulu esihlanganisa izingxenye aseNtshonalanga naseMpumalanga Yurophu of. Poltava is ahlanganiswe Kiev, laseKharkov, Dnepropetrovsk, Sumy futhi Kremenchug ngenxa nemigwaqo emikhulu.
Zikhona anjalo imoto routs ukuthi zidlule Poltava:
E 40 - Kiev-laseKharkov kuthelawayeka (isiqondiso Eastern - Chutovo, laseKharkov; isiqondiso Western - Horol, Lubny, Kiev);
H-12 - National imoto emgwaqeni (Kotelva, Ahtirka, Sumy);
M-22 - International imoto emgwaqeni (Kremenchug).
Ngoba Umgibeli zokuhamba enjalo zokuthutha zomphakathi zisetshenziswa: kagesi - Inqola-amabhasi; Motor ezokuthutha - amabhasi, namatekisi, umgibeli wetekisi. Kukhona sebhasi on Velikotyrnovskaya emgwaqweni, eduze Kiev-laseKharkov kuthelawayeka (E40) lapho umuntu angahamba lonke elase-Ukraine nase-Europe. Futhi, kukhona esifundeni eziteshini zamabhasi on Shevchenko futhi Zenkovskaya nasemigwaqweni. Futhi, kukhona iziteshi ezimbili wesitimela edolobheni (Iziteshi Kyivska futhi Pivdenna). Amathrekhi Railway yokuhlanganisa izwe Poltava nge Kiev, laseKharkov, Kremenchug, Lozovaya futhi Krasnograd. Kiev-laseKharkov Umzila gesi futhi inikeza indlela izitimela fast futhi zikhululekile. Kukagesi wesitimela Poltava - laseKharkov laqedwa ngo-August 2008.
Bangu 12 izikhungo zemfundo ephakeme ensimini ka idolobha lethu. Kunjalo: Ukrainian zezokwelapha stomatological Academy, Poltava State kokuLima Academy, Poltava National kwezobuchwepheshe University iqanjwe Kondratyuk, Poltava National Pedagogical University iqanjwe Korolenko, Poltava University of Economics and Trade, Poltava University of Economics and Law; futhi kukhona amandla anjalo of: National Academy of Law in Ukraine iqanjwe Y. Mudryi, Interior Senkonzo University, the Interregional Academy of Personnel Management, International European University, Kiev National University of Culture and Art, National Technological Universityof Ukraine "Kharkiv Polytechnicak Institute", Poltava Business Institute, the Academician Yuriy Bugay International Scientific and Technical University. In idolobha lethu kukhona 52 jikelele imfundo izikhungo 54 izikhungo zasenkulisa, phakathi kwawo: 14 izikhungo ezintsha uhlobo (Izikole idolobha kanye zemidlalo). 2 Izikole ekhethekile engqondweni noma izingane abagula ngokomzimba. 1 esikoleni sakusihlwa. 5 izikhungo zemfundo ezizimele.
Poltava has imithombo yemvelo emangalisayo, isikhundla kwezomnotho kanye ezindawo efanelekayo. Yingakho insimu yalo kukhona enterprises eziningi kangaka, onguchwepheshe uphethiloli, ukudla, izimboni ukukhanya futhi Woodworking. Poltava ikhona budebuduze Metallurgical ezinkulu, isakhiwo umshini kanye nezikhungo wezesayensi Kiev, laseKharkov, Dnepropetrovsk ezivuna ukuthuthukiswa isakhiwo umshini kanye nezimboni amakhemikhali. idolobha lethu unikeza 1/4 zokukhiqiza esifundeni yezimboni.
Isibuyekezo sokugcina:25 May 19